Vamwe vashandisi vanowana isiriyo "yekuchengetedza izere" yambiro mushure mekuvandudza kune iOS 15 | IPhone nhau
Zvinotaridzika kunge zvisingaite, asi kunyange kuburitsa isingaverengeke pre-yekupedzisira beta vhezheni kune vese vashandisi, nguva nenguva «tsikidzi»Mune yekupedzisira vhezheni yezvimwe zvakakosha kugadzirisa kweApple software. Uye zvichave kuti ivo havana kuyedzwa, kutadza uye kushandurwa kushambadza nauseam.
Zvakanaka, zvinoita sekunge muIOS 15 uye iPadOS 15 chikanganiso chakatariswa nevanogadzira, sezvo vamwe vashandisi vatanga kunyunyuta kuti mushure mekuvandudza yavo iPhones nePads svondo rino, vanowana yambiro ye «IPhone (kana iPad) yekuchengetedza inenge yakazaraKana ivo chaizvo vaine yakawanda yemahara yekuchengetedza.
Vazhinji vashandisi ve iPhone ne iPad vari kutaura pasocial network chikanganiso chakati kuti chinoshamisika chinozoonekwa mushure mekugadzirisa zvigadzirwa zvavo iOS 15 o iPadOS 15. Zvinoitika kuti chenjedzo inoita senge yambiro yekuti kuchengeterwa kwechigadzirwa kunenge kwazara, kana zvisiri chaizvo.
Uye zvinosuruvarisa, iwe haugone "kudzima" yambiro iyi kubva paMesystem skrini, nekuti mudziyo wako une yakawanda yemahara nzvimbo, asi iOS inofunga kuti haisi. Kunyangwe iwe uchiri kudzima chimwe chinhu uye kusunungura imwe imwe nzvimbo, yambiro inoramba ichionekwa zvisizvo.
@AppleSupport Hei, wakwidziridzwa kuita ios15 uye kuwana yekuchengetedza inenge yakazara chiziviso kana paine zvinopfuura gumi GB nzvimbo inowanika? Bhugi ini ndinofungidzira? Pane nzira here yekugadzirisa izvi pic.twitter.com/EZ81OljR52
Iyo Apple Tsigiro timu yatoziva nezve bug. Parizvino, zvese zvavakaita kuraira vashandisi vanosangana nedambudziko iri reboot zvishandiso zvako, asi zvinoita sekunge mhinduro yakadaro haigoneke muzviitiko zvakawanda, uye chenjedzo "iPhone kuchengetedza inenge yakazara" inoramba ichioneka.
Pasina mubvunzo muCupertino ivo vari kutoshanda kugadzirisa iyi diki dudu, uye isu tine chokwadi chekuti vachakurumidza kuvhura diki yekuvandudza zvese iOS 15 uye iPadOS 15 yekugadzirisa iyo nyonganiso, uye nekudaro inonyangadza yambiro inotsamwisa yekuti urikupererwa nechengetedzo yemahara apo zvisiri chaizvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Vamwe vashandisi vanowana isiriyo "yekuchengetedza izere" yambiro mushure mekuvandudza kune iOS 15
Anker PowerCore 5K Magnetic Bhatiri Ongororo